5 xal u raad raac Verizon Android telefoonada
1 kaabta iPhone
IPhone kaabta Notes
Kaabta iPhone Photos
Kaabta iPhone Xiriir
IPhone kaabta in PC
Kaabta iPod Music
Bedelka Music inay iPhone
Softwares kaabta iPhone
Soo Celinta kaabta Lugood
Lugood ee kaabta shawladda
iPhone kaabta Password
Lugood Arrimaha kaabta
kaabta Talooyin Lugood
kaabta Talooyin iCloud
2 Android kaabta
SMS Android kaabta
Kaabta Android App Data
Kaabta Phones Verizon
Waraaqda Android kaabta
Soo Celinta Android kaabta
3 kaabta BlackBerry
Xiriirada BlackBerry kaabta
SMS BlackBerry kaabta
Shawladda kaabta BlackBerry
4 kaabta Phone
Kaabta Windows Phone
Buuga Taleefanada ee kaabta
Kaabta Google Photos
Xiriirada Solutions kaabta
Auto-kaabta Phone Photos
Phone kaabta in Cloud
Kaabta Phone Solutions
Sababaha kaabta Phone
Dhamaan telefoonada heshiis leeyihiin xanibaadyo waxa user samayn karaa. Backing ilaa macluumaadka la telefoonada Verizon Android noqon kartaa hawl adag sababtoo ah waxay xayiraad ku soo rogeen qalabka. Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan si ay dib ilaa xogta aad ka Verizon Android phone iyada oo loo marayo ka kaaftoomi kasta. Ha noo eegno ugu fiican oo ka mid ah sida hoos ku qoran.
Wondershare MobileTrans waa habka ugu fiican ee aad gurmad Verizon Android phone. Iyadoo Wondershare MobileTrans, waxaad la ikhtiyaarka aad PC u gaar ah, kaas oo noqon doona arrin waxtar leh haddii ay dhacdo in aad mar uun in la soo celiyo wareejin karaan files warbaahinta, abuse call, xiriiro iyo ka badan guud ahaan nidaamyada hawlgalka mobile martay gurmad macluumaadkaaga smartphone. Waa la heli karo, la taaban karo, iyo taageerada dhammaan nidaamyada hawlgalka mobile waaweyn ee.
Bedelka content dhexeeya Android, iDevice, WinPhone iyo Nokia Symbian 1 click.
Bedelka ee xiriirada ugu, sawiro, fariimaha, music, video, barnaamijyadooda, jadwalka iyo Guda yeedha.
Kaabta Android, iDevice, xogta phone WinPhone iyo Nokia Symbian in computer.
Waraaqda hayaan abuuray by MobileTrans, Lugood, Samsung Kies, BlackBerry® Desktop Suite iyo in ka badan oo suuqa kala iibsiga telefoonka.
Taageerada shabakadaha kala duwan, sida AT & T, qaran, Verizon, T-Mobile.
Taageerada 3000+ telefoonada socda Android, Nokia Symbian iyo macruufka.
Bedelka Guda wac, music, sawiro, fariimaha qoraalka ah, barnaamijyada iyo videos halkii kaliya xiriirrada ee casriga ah.
Jidka la yaabka leh si ay u gudbiyaan xiriirada ay ka mid yihiin horyaal shaqo, cinwaanada emailka, magacyada shirkadaha iyo wax badan oo dheeraad ah.
Waa habka ugu nabad badan gurmad xogta adiga oo aan iyaga laga badiyay iyo xogta lagu kaydiyaa iyada oo aan wax isbedel ah ku sameeyey in.
Bedelka badan xiriirada, nuqul ka dhexeeya dhammaan qalabka aad ka fariimaha qoraalka ah, barnaamijyadooda, sawiro, abuse call oo music kaliya la isticmaalayo mid ka mid click.
Bedelka qalabka kala duwan leh Wondershare MobileTrans. Bedelka macluumaad kasta oo aad u baahan tahay wadaagaan qalabka kala duwan oo ay ku jiraan Symbian, macruufka iyo Android.
Telefoonada Heshiiska ayaa sidoo kale taageeray. Bedelka xogta aad wax dhib ah maleh adeegga telefoonada gacanta ee aad u isticmaali leeyihiin.
Noocyada File taageerayaan
Wondershare MobileTrans Taageertaa tiro badan oo ah noocyada file sida Xiriirada, Messages, Calendar, Photos, Music, Video, wac Guda iyo Apps iwm
Waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans in gurmad liis dheer oo qalabka (in ka badan 3000 oo noqon saxda ah), tusaale ahaan, waxa ay taageertaa oo si fiican u shaqeeya waxyaabaha kala duwan ee Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG, Sony, Google, Huawei, Motorola , ZTE iyo warshado kale oo mobile. Waxa kale oo ay taageertaa qalabka ku saleysan ee macruufka, Android, Windows iyo Symbian nidaamyada hawlgalka si aad u fudud.
WordPress la odhan karaa in ay ka mid sare Android barnaamijyadooda gurmad daruur noqon. Waxaa dabiici ah oo leh raad toos ah sifo in wax yaabahan kahyraadka kuwa jeclaan lahaa in gurmad sanamyadooda, videos iyo sidoo kale macluumaad kale oo si toos ah u si fudud u helaan ka dib. Waxa ay taageertaa dhufto ee kala duwan sida Linux, Mac, Windows, iPad, iPhone, Android iyo Blackberry. WordPress wuxuu leeyahay adeeg ka xoogbadan lagu magacaabo WordPress Pro. Pro waa in kuwa doonaya kaydinta weyn oo lagu daray waxa ay bixisaa 1 TB ee kaydinta by default.
Howlan files waa mid fudud u dhexeeya qalabka aad.
WordPress taageertaa nidaamyada hawlgalka iyo dhufto ee mobile kala duwan ee la heli karo.
Users ma wax laga walwalo sababtoo ah waxa ay si joogto ah server waa online. Ka maqnaa No.
Barnaamijka WordPress waa ma adag tahay in la dhiso.
Users laga yaabaa in ay helaan files in la tirtiro iyada oo qoraalkii hore ee WordPress.
Mararka qaarkood files helo adkaan kartaa samaynta files ku adag tahay in la helo.
Google Drive waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo la qabsan kara adeegyada gurmad daruur badan wax soo saarka kaliya. Waa lacag la'aan ah iyo sidoo kale waxaad heli kartaa dhammaan faylasha aad on taas oo ka dhigaysa isticmaalka kombiyuutarada, kiniiniyada iyo aad casriga ah. Iyadoo Google Drive, waxaad marin u leedahay adiga kuu gaar ah videos, music, sawirada, waraaqaha iwm in lagu xoojiyaa si ammaan ah online yeelan karaan. Waxaad sidoo kale ku dhiiri gelin kartaa dadka kale si aad u eegto, xaalkaa ama ka baxaan fikrado ku saabsan mid ka mid ah faylasha aad la awoodaha la wadaago fiican Google Drive ee.
Mid ka mid ah adeegyada gurmad daruur ugu awoodi karo laga heli karo maanta.
15GB lacag la'aan ah lagu kaydiyo dhammaan dadka isticmaala.
Xal Gaarka ah si ay u wadaagaan files u dhaxeeya saaxiibada, qoyska iyo asxaabta.
Aad u yar macluumaadka laga heli karaa internetka isticmaala cusub si ay u bartaan sida loo isticmaalo Google Drive.
Users ma ku dari kartaa sirta ah si ay files.
4. Kaaliyaha kaabta by Verizon Wireless
Kaaliyaha kaabta ka Verizon Wireless waa hab ammaan iyo nabad ah si loo badbaadiyo qorin oo idil. Xogta xoojiyaa lagu mar walba lagala soo bixi karaa in aad telefoon cusub ama in telefoonka aad hadda haddii aad si qalad ah u tirtiray ama haddii ay wax dhacaan in ay masixi. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa app ku saabsan casriga ah iyo waxa aad heli kartaa macluumaadka aad ku badbaadi aad PC ama Mac. Tani waa hab fiican oo aan marnaba lumiso qorin xitaa haddii uu kaa lumo ama aad telefoon jebin. Waxaa gabi ahaanba waa bilaash ah oo si sahlan ay u isticmaalaan. Si aad ku raaxaysan adeeggan, waxaad u baahan tahay qalab Verizon iyo xisaabta.
Waa lacag la'aan ah oo aan u baahnayn isticmaala in ay bixiyaan iyo inta aad u leeyihiin a Verizon wireless account ama qalab.
Waxaa intaasi dheer taageertaa dhufto ee kala duwan iyo nidaamyada hawlgalka.
Waxaa kale oo fudud oo si sahlan loo qotomiyey.
Ku xaddidan Verizon users wireless oo kaliya.
Syncdroid waa gurmad ah oo lacag la'aan ah iyo soo celinta qalab qalabka android. Waxay ka dhigaysa gurmad amaana oo dhammaan xogta ku qalab android aad. Waxa ay taageertaa PC Windows iyo qalab android. Iyadoo app android, users kartaan si sahal ah gurmad iyo soo celinta wixii ay Android iyo ka card SD ama DropBox.
Syncdroid taageertaa dhammaan faylasha android ay ka mid yihiin videos, music, iwm
Xawaaraha ee kaabta waa si degdeg ah marka loo eego inta badan adeegyada.
Waxaa xitaa waxay bixisaa synching ama gurmad si toos ah ugu DropBox.
Sidoo kale waa fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo.
Interface user ma laha inta badan si ay u bixiyaan.
Bedelka Android Faylal ay ka badan WiFi
Top 5 Lugood Apps Remote ah ee Android
Top 3 Lugood Badeli kara ee Android
Sida loo soo celiya Android Phone ka hayaan Effortlessly
> Resource > Android Data Recovery > 5 xal u raad raac Verizon Android telefoonada